Nitokona tamin’ny karama tsy voaloa nandritra ny fiparitahan’ny COVID-19 ireo mpiasan’ny akanjo Kambodziana · Global Voices teny Malagasy
Nitokona tamin'ny karama tsy voaloa nandritra ny fiparitahan'ny COVID-19 ireo mpiasan'ny akanjo Kambodziana
Voadika ny 10 Avrily 2020 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, Yorùbá, Ελληνικά, Français, русский, Nederlands, Español, Português, українська, English
Mpiasa ao amin'ny Canteran Apparel (Kambodza) Co. Ltd. nitokona tamin'ny 25 Martsa 2020 noho ny karama tsy voaloa tao amin'ny orinasa Phnom Penh (Sary natolotry ny VOD)
Ity lahatsoratra nasiam-panitsiana navoakan'i Saut Sok Prathna ity dia avy ao amin'ny VOD News, tranonkalam-baovao tsy miankina iray any Kambodza, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices indray ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaraba votoaty. Nadika avy amin'ny lahatsoratra ôrizinaly tao amin'ny VOD Khmer
Mpiasan'ny akanjo efa ho 1.000 no nanao fitokonana teo ivelan'ny orinasa Phnom Penh tamin'ny 25 Martsa 2020, taorian'ny tsy nandoavan'ny tompon'ny orinasa ny karaman'izy ireo, izay nolazain'ny orinasa fa noho ny fihenan'ny fandoavam-bola avy amin'ny mpanjifa mandritra izao valanaretina COVID-19 izao.
Nanao fihetsiketsehana ny mpiasan'ny orinasa izay nampiasain'i Canteran Apparel (Kambodza) Co. Ltd. taorian'ny tsy nahavitan'ilay orinasa nandoa ny karaman'izy ireo feno ny roa herinandro farany, hoy ilay mpiasa Sann Sopha tamin'ny VOD.
Nilaza i Sopha fa nandà ny hanao sonia fifanarahana tamin'ny fanomezan-toky fa handoa ny karaman'ny mpiasa tsy voaloa amin'ny voalohan'ny volana hoavy, araka ny nangatahan'ireo mpiasa ny tompon'ny orinasa.
Hanohy ny fitokonan'izy ireo ny mpiasa mba hanerena ny orinasa hanaja ny fepetra amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa tsy tapaka. Nangataka ny orinasa hanao fifanarahana an-taratasy niaraka tamin'izy ireo ny mpiasa saingy tsy sahy nanao izany fifanekena izany taminay ny orinasa. Nanome fialan-tsiny fotsiny noho izatsy sy izaroa ny orinasa.
Nilaza i Sopha fa tsy nandoa ny karaman'ireo mpiasa ara-dalàna ny orinasa tao anatin'ny efa-bolana. Nilaza izy fa Shinoa ny tompon'ny orinasa, saingy Maleziana no misoratra ho tompony ao amin'ny lisitry ny Fikambanan'ny Orinasa Mpanao Akanjo any Kambodza. Mampiasa olona miisa 935 ity orinasa ity, araka ny filazan'ny GMAC.
Nilaza i Kim Bou, lehiben'ny fitantanana ao amin'ny orinasa fa tsy misy intsony ireo mpanjifa nandritra ny fitotonganan'ny toekarena erantany vokatry ny fiparitahan'ny COVID-19, aretin'ny taovam-pisefoana vaovao izay hita voalohany tany Shina tamin'ny faran'ny volana Desambra 2019 teo.
Nilaza i Bou fa tratran'ny krizy ara-bola ny Canteran ka tsy afaka mandoa ny karaman'ny mpiasa noho izany, saingy nilaza izy fa miezaka ny mitady fanohanana ara-bola ny orinasa handoavana ny karaman'ny mpiasa.
Tojo fahasahiranana ny orinasa eny an-tsena [iraisampirenena], ary nanemotra ny fandoavan'izy ireo ny vola ihany koa ny mpanjifa noho ny olan'ny Covid-19. Niezaka mafy ny orinasanay mitady vahaolana ho an'ny mpiasa. Na izany aza, haloanay izany raha vao misy ny vola ary haloan'ny tompony orinasa tsikelikely izany mandra-paha-fenon'ny karama.
Mety hihoatra ny 1 isanjato farafahakeliny ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny harin-karena ankapobeny ao Kambodza ary mety ho 3 isanjato raha ny tena ratsy indrindra no mitranga, araka ny fanazavana avy amin'ny Bankin'ny Fampandrosona Aziatika tamin'ny fiandohan'ny volana marsa. Mety ho eo amin'ny 4 isanjaton'ny harin-karena anatiny eo ny fiantraikany. Mety hanakaiky ny 4 isanjato izany raha miparitaka manerana ny firenena ny valanaretina.
Nanamafy ny Minisiteran'ny Fahasalamana fa mitotaly 96 ny olona tratran'ny aretina tao amin'ny firenena nanomboka tamin'ny volana Janoary (hatramin'ny 26 Martsa) ary olona miisa 10 no efa sitrana tamin'ilay aretina.
Araka ny filazan'i Sopha tamin'ny VOD dia nilaza ny mpiasa fa hiatrika fahasahiranana izy ireo eo amin'ny fitantanana ny fandaniana isan'andro, toy ny hofan-trano, ny zavatra ilaina, saram-pianaran'ny ankizy ary ny fampindram-bola any amin'ny banky raha tsy mandoa ny karaman'izy ireo feno mahazatra ny mpampiasa azy ireo.
Nilaza i Pav Sina, filohan'ny Sendikan'ny Fikambanan'ny Mpiasa fa manitsakitsaka ny lalàna ilay orinasa amin'ny tsy fandoavany ny karaman'izy ireo feno.
Nilaza i Sina fa tokony hitady vahaolana haingana ny Minisiteran'ny Asa mba hanampiana ireo mpiasa miady amin'ny fandaniana isan'andro.
Tsy avelantsika hiala tsiny amin'ny fanemorana ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ny mpampiasa, satria manana trosa ny mpiasa ary tsy afaka miala tsiny izy ireo amin'ny fanemorana ny fandaniany. Handoa onitra ireo [mpiasa] raha tsy afaka mandoa trosa amin'ny fotoana tokony handoavana izany izy ireo.
Tsy tratra antso tamin'ny fanehoan-kevitra nandritra ny fotoana namoahana ny lahatsoratra i Peng Phoeun, filoha lefitry ny biraon'ny misahana ny olana arak'asa ao amin'ny Minisiteran'ny Asa.